5 SELF-CARE TIPS FOR BURMESE WOMEN WHO ARE SO BUSY – OOTDMYANMAR
5 SELF-CARE TIPS FOR BURMESE WOMEN WHO ARE SO BUSY
No Comments on5SELF-CARE TIPS FOR BURMESE WOMEN WHO ARE SO BUSY
အလုပ်များတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်နိုင်မယ့် အချက် ၅ ချက်
MDS MYANMAR မှ ရေးသားဖန်တီးသည်။
Do you always feel like 24 hours inaday is not enough? Being fully occupied with work or personal errands, many women find themselves constantly loaded, to the point where they no longer have the time to treat themselves.
တစ်နေ့တာအတွက် နာရီပေါင်း ၂၄ နာရီက ကိုယ့်အတွက်မလုံလောက်ဘူး လို့ ခံစားနေရပါသလား။ အလုပ်ကိစ္စ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေကြောင့် အမြဲလိုလိုမအားမလပ်ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့အချိန်တွေ လျော့နည်းလာကြပါတယ်။
Are you one of them? Put in mind that you are human and takingapause to care for yourself shouldn’t be neglected. If your lifestyle is constantly on the go, make sure to insert self-care habits to avoid getting ‘burned out’. Here are some tips to squeeze in some ‘me’
time:သင်ကရော အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အမြဲသတိချပ်ပါ။ မအားလပ်တဲ့အလုပ်တွေကနေ ခဏအနားယူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့ကိုလည်း မျက်ကွယ်မပြုပါနဲ့နော်။ ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံက အလုပ်တွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ self-care လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်လေးကို မွေးမြူသင့်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ ဆိုတဲ့ အကြံဉာဏ်လေးတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Enjoy your shower (ရေချိုးချိန်ကို ဇိမ်ရှိရှိအသုံးချပါ။)
Don’t rush your time in the shower. Make your shower routineaself-care time by adding in some special treats. This could be playing your favorite music, or using special towels or scents for your body.
ရေချိုးတဲ့အချိန်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်အဆုံးမသတ်လိုက်ပါနဲ့။ ရေချိုးရင်း ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းနားထောင်မယ်၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကောင်းကောင်းလေးသုံးမယ် ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အမွှေးနံ့သာကိုသုံးမယ်။ အဲ့ဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ရေချိုးတဲ့အချိန်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်တဲ့အချိန်အဖြစ် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
2. Make meditationapart of your daily routine. (တရားထိုင်ခြင်းကို နေ့တဓူဝလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုလိုပြုလုပ်ပါ။)
Meditation is proven to haveaspecial effect onaperson’s well-being. If you want to give itatry, start with at least five minutes every morning, then slowly increase the time to 10 minutes. If you have difficulty concentrating your thoughts, you can download an application that can help you.
တရားထိုင်ခြင်းက က လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေတယ်လို့ သက်သေသာဓကတွေ ရှိထားပါတယ်။ ဒီအကျင့်လေးကို စပြီးမွေးမြူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နံနက်ပိုင်းမှာ ငါးမိလောက် စပြီး တရားထိုင်ကြည့်ပါ။ ကျင့်သားရလာရင်တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အချိန်ကို ၁၀ မိနစ်အထိ တိုးပြီးထိုင်ကြည့်ပါ။ စိတ်အာရုံစုစည်းဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင် တရားထိုင်ရာမှာ အကူအညီဖြစ်မယ့် application တွေသုံးကြည့်ပါ။
3. Enjoy your lunchtime. (နေ့လည်စာစားချိန်မှာ အပြည့်အဝအနားယူပါ။)
Step away from your computer or work desk and find an enjoyable dining spot in your office. You deserve to enjoy your break and besides you’ll be able to stretch your legs and let your eyes rest. You’ll be able to enjoy your food and go back to work withafresher mood.
ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရှေ့ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်စားပွဲကနေ ခပ်ဝေးဝေးကိုသွားပြီး နေ့လည်စာစားလို့ကောင်းမယ့် နေရာကောင်းတစ်ခုကိုရှာပါ။ အနားယူချိန်ကို အပြည့်အဝအသုံးချဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခြေလက်ဆန့်ရင်း မျက်လုံးကိုလည်း အနားပေးရာရောက်ပါတယ်။ ဒါမှ နေ့လည်စာကို အရသာရှိရှိစားသုံးပြီး အလုပ်ပြန်လုပ်တဲ့အခါ စိတ်က လန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာပါ။
4. Social media detox from time to time.(ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပါ။)
Pausing from your social media once inawhile will lessen your stress from all the noise and help you focus on important tasks to do.
တစ်ခါတလေ ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေ ခေတ္တအနားယူခြင်းကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေကနေဝေးကွာစေပြီး အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကို ပိုအာရုံစိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
5. Treat yourself once inawhile. (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မကြာခဏဆုပေးပါ။)
If there is one person who deserves to be treated that is — YOU. Little treats like buying your favorite bubble tea or shoppingadress you love; as long as it makes you feel good. For example, if there isasale why not grab the opportunity to treat yourself once inawhile. You know you deserve it for working so hard.
ကျွေးမွေးဧည့်ခံဖို့ထိုက်တန်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါတစ်ခြားလူမဟုတ်ပါဘူး သင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ bubble tea ဝယ်သောက်တာ၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အဝတ်အစားတစ်စုံ ဝယ်တာ စတဲ့ ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာမျိုးတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် – ပစ္စည်းတစ်ခု လျှော့ဈေးနဲ့ရတယ်ဆိုပါစို့၊ တစ်ခါတလေ ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆုပေးသင့်ပါတယ်။ ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့သင့်အတွက် ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးက ထိုက်တန်တယ်ပါတယ်။
PS If you are looking for the perfect OOTD for your self-care tips you can check this link for an easy online-fashion shopping.
Tags mdsmyanmar, ootdmyanmar
← 10 TATTOO AREAS IF YOU WANT TO KEEP IT → 08 MINIMALIST OUTFITS THAT WILL LOOK CHIC NO MATTER WHAT